EM4233 Chip ကဒ်, အမြင့်လုံခြုံ ISO15693 Protocol ကို EM4233 Chip, EM4233 Chip EM4035 Chip များနှင့် EM4135 Chip အစားထိုး
 » RFID Card ကို » ချိတ်ဆက်မှု Chip ကဒ် » HF Chip ကဒ်
HF Chip ကဒ် EM4233 Chip ကဒ်, EM4233 Chip EM4035 Chip များနှင့် EM4135 Chip အစားထိုး, အမြင့်လုံခြုံ ISO15693 Protocol ကို EM4233 Chip
ISO15693 / ISO18000-3 စံလိုက်နာ
operating အကြိမ်ရေ: 13.56MHz
ရှည်လျားသောအကွာအဝေး, အနိမ့်ပါဝါကိုအနီးအနား transponder IC
60 နှစ်ပေါင်းဒေတာ retention ကို
64-နည်းနည်း ISO15693 ထူးခြားသော Identifier (UID)
2တှငျဖှဲ့စညျးဋနည်းနည်း EEPROM 64 ၏လုပ်ကွက် 32 -bits
1.625ဋ bit နဲ့အသုံးပြုသူရဲ့ data တွေကိုမှတ်ဉာဏ် (52 ၏လုပ်ကွက် 32 -bits)
တစ်ဦးကထိန်းချုပ်ထားပြီးလုံလုံခြုံခြုံ privacy ကို mode ကို 96 နည်းနည်းလျှို့ဝှက်သော့နှင့်မြင့်မားသောလုံခြုံ crypto အင်ဂျင်ကို
ရဲ့ login command ကိုများနှင့်တစ်ဦးအပေါ်အခြေခံပြီးလုံခြုံရေး mode ကိုတစ်ဦးအနိမ့်အဆင့်ကိုရွေးဖို့တနည်းအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်ချေ 32 နည်းနည်း password ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်လွင်ပြင်စာသားကိုမှတ်ဉာဏ်အဖြစ်.
စမတ်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အီလက်ထရောနစ်ပုဒ်မ Surveillance အင်္ဂါရပ်
Password ကိုကာကွယ်ထားသည်အစဉ်အမြဲတံဆိပ်ပိတ်ထားဖို့ function ကိုဖွိုဖကျြ
ဒေတာများသိုလှောင် Format ကို Identifier (DSFID)
လျှောက်လွှာကွင်းဆင်း Identifier (afi) ထောက်ခံ
ယန္တရားများသော့ခတ် EEPROM လုပ်ကွက် / စာမျက်နှာများ
အားလုံးမဖြစ်မနေနှင့် optional ကို ISO / IEC အများစုကိုထောကျပံ့ 15693 ပညတ်တော်တို့ကိုနှင့်ထုံးစံပညတ်တော်တို့ကိုတစ်ဦးပြည့်စုံတစ်စုံ
chip ကို-on အချက်မှာ capacitor options များ: 23.5PF နှင့် 97pF
အပူချိန်အကွာအဝေး: -40℃ ~ + 85 ℃
Bond pads လှန်-chip ကိုပရိသတ်အဘို့ optimized
သင်တို့သည်လည်းအထူးပုံသဏ္ဍာန်ကတ်များကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်, စက္ကူကတ်များ, RFID Keychains, လက်ပတ်နှင့်အခြားထုတ်ကုန်များ.
အရွယ်: က ISO စံကဒ် L ကို 85,6 T က× 54 W × 0.84(0.4 ±)မီလီမီတာ, သို့မဟုတ်အရွယ်အစားကိုသတ်မှတ်
ပစ္စည်း: PVC / ကို ABS / PET / PETG / စက္ကူ, 0.13မီလီမီတာကြေးနီဝါယာကြိုး
encapsulation တွေကိုသေချာမှုလုပ်ငန်းစဉ်: အလိုအလျောက် ultrasonic အော်တိုစက်ရုံလိုင်း / touch နဲ့ဂဟေ
The configurable 2k bit EEPROM memory included in the chip is organized in 64 စကား 32 -bits. The high level of flexibility in the memory management permits thatamemory word can be read/write protected and/or locked separately.
Library management, Archives and collections, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, Long-term asset tagging, Supply Chain Management, Scenic tourist attractions tickets, စသည်တို့ကို.
I am interested in your product EM4233 Chip Card, အမြင့်လုံခြုံ ISO15693 Protocol ကို EM4233 Chip, EM4233 Chip EM4035 Chip များနှင့် EM4135 Chip အစားထိုး
prev: ငါကုတ် SLI ကို Chip ကဒ်, ငါကုတ် SLI ကို-L ကို Chip ကဒ်, ငါကုတ် SLI ကို-S က Chip ကဒ်
နောက်တစ်ခု: ISO11784 ISO11785 Protocol ကိုအတူလိုက်ဖက်တဲ့ EM4450 Chip ကဒ်
PicoPass 2KS / 16KS / 32KS chip Card ဖြစ်သည်, ISO ကို 14443 TypeB / A Protocol ကို, ISO ကို 15693 protocol ကို induction အကွာအဝေးလက်လှမ်းမမီ 1.5 မီတာ
စိတ်ကြိုက် MF S50 / MF S70 ပြန်လုပ် Writable 4byte UID Card ကို, 7က byte UID Card ကို
FM ရေ S70 Chip ကဒ်, MF1 IC S70 Chip နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့
NFC ကိုအကြီးစား-စွမ်းရည် TOPAZ512 Chip အဖြူရောင်ကဒ်